Askar Ka Tirsan Shisheeyaha Oo Shabeelada Hoose Lagu Dilay. – Calamada.com
Askar Ka Tirsan Shisheeyaha Oo Shabeelada Hoose Lagu Dilay.
calamada October 5, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya gobalka Shabeelada hoose waxey sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay weerar dhabba gal ah loo dhigay kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Afrikaanta oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobalkaasi.
Weerarka Kamiinka ah waxa uu sigaar ah kaga dhacay wadada isku xirta deegaanada Buufow iyo Shalambood ee gobalka Shabeelada hoose’iyadoona markii dambe kamiinka isku badalay dagaal culus oo muddo socday.
Idaacada Islaamigaa ah ee Andalus ayaa baahisay in ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay dul istaageen meydadka ilaa iyo afar askari oo ah kuwa Kufaarta AMISOM.
Sidoo kale ciidamada Shabaabul Mujaahidiin waxey kamiin u dhigeen maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada federaalka oo ku socdaalayay duleedka deegaanka Numbar-50 ee gobalka Shabeelada hoose wali lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ee maleeshiyaatka Murtadiinta lagu gaarsiiyay kamiinkaasi.
Previous: Madaafiic Lagu Garaacay Difaacyada Ciidamada Jabuuti.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 04-01-1438 Hijri.